Antigua နှင့် Barbuda နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို -
● Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
● Antigua နှင့် Barbuda မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား
● Antigua နှင့် Barbuda ရှိရွှေဗီဇာ
● Antigua နှင့် Barbuda မှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်
●အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား
အကောင်းဆုံး Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်း နှင့်ရှေ့နေများ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစား Antigua နှင့် Barbuda ရှိနိုင်ငံသားအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏အကာအကွယ်အတွက်တွဲဖက်အလုပ်လုပ်သည်။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှု Antigua and Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်နေထိုင်မှု၊ Antigua and Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဒုတိယနိုင်ငံ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား Antigua and Barbuda တွင်နိုင်ငံသားနှင့်နေထိုင်ခွင့်၊ Antigua and Barbuda တွင်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ Antigua and Barbuda တွင်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသား၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသား၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား။ , Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့် Residency၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့် Residency၊ ဒုတိယ Antidua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှစ်နိုင်ငံ၊ Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ Antigua and Barbuda တွင်စီးပွားရေးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့် Residency၊ Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှ Residency၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့် Antigua နှင့် Barbuda တွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်သံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံ Antigua နှင့် Barbuda ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ် Antigua နှင့် Barbuda ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိရွှေဗီဇာ၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရွှေဗီဇာ၊ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ, Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရွှေ visa နှင့်ဘာဘူဒါ၊ အန္တိဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ရွှေရွှေဗီဇာ၊ c နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းနှင့်ရွှေဗီဇာ၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ရွှေဗီဇာ၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊
အပိုဆောင်းအထောက်အပံ့ဖြင့်အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ ၁ ချက်ဖြေရှင်းချက်” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Antigua နှင့် Barbuda တွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: အမေရိကန်ဒေါ်လာ 100,000
Antigua နှင့် Barbuda အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
နိုင်ငံ၏ပင်လယ်ကမ်းခြေ ၃၆၅ ခုကိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်တွေ့နိုင်ပြီးတစ်နှစ်တာ၏တစ်နေ့တာကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ မကျသည်ဖြစ်စေနိုင်ငံသည်ကာရစ်ဘီယံ၌အကောင်းဆုံးနှင့်အဖြူနှင့်ပန်းရောင်သဲကမ်းခြေများနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်။ ဒစ်ကင်းဆန်ဂလားပင်လယ်အော်သည်ရှည်လျားပြီးရေပန်းစားသောပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဖိအားပေးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ရလဒ်များနှင့်အတူဖန်ခွက်လှေပေါ်တွင်လည်ပတ်ခြင်းမှသည်ငှက်ပျောမျောခြင်းနှင့်နှင်းလျှောစီးခြင်းအထိဖြစ်သည်။ Pigeon Point သည်တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိအများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောပင်လယ်ကမ်းခြေဖြစ်ပြီးသင်ရေကူး၊ ရေကူးခြင်းနှင့်နေပူခြင်းကိုခံနိုင်သည်။ Half Moon Bay သည်လုံးဝဝေးကွာသောနေရာတွင်ရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်စွန့်ခွာထွက်ခွာသွားသောပင်လယ်ကမ်းခြေဖြစ်သည်။
ဒေသခံ verdure ယေဘုယျအားဖြင့်ဝေးလံသောဒေသများနှင့်တောင်တက်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါကျွန်းများတွင်ပျံတတ်သောသတ္တဝါပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ဥပမာ - egret အနည်းငယ်၊ မြေသားအရောင်ရှိသော pelican နှင့် Heron အမျိုးမျိုး။ ဘာဘူဒါသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိအဓိကငှက်များခိုလှုံရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်ဖရီးဂိတ်စစ်သည်တိရစ္ဆာန်များကိုထူးခြားစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားသော Codrington Lagoon National Park ၏နေရာဖြစ်သည်။ သန္တာကျောက်တန်းများသည်စွမ်းအင်ပြည့်မီသောခုန်များနှင့်ရေကူးသူများအတွက်တောက်ပသောရွှံ့နွံတွင်းများအဖြစ်ဖြည့်သည်။ စိန့်မာရိဇုန်ရှိ Cades Reef သည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသောရေကူးသူနှင့်ရေငုပ်သမားတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လုံးဝလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါကျွန်းတို့သည်ကာရစ်ဘီယံကုန်သွယ်မှု၏လှည့်ကွက်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့်တည်းခိုခန်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်အမှန်တကယ်တွေ့ဆုံရမည့်ချစ်ခင်ရဆုံးသူများနေထိုင်ရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ Antigua နှင့် Barbuda တို့ကိုထူးခြားစေသည့်အရာမှာ visitors ည့်သည်များအနေဖြင့် quality ည့်သည်များသိသာထင်ရှားသောအရည်အသွေးပြည့်မီသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကိုကမ်းလှမ်းနေစဉ်၎င်း၏စစ်မှန်သောကာရစ်ဘီယံခံစားမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ Antigua သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုရှိသည်ဟုဝန်ခံသည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြနိုင်သော်လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်အတွက်တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းအတွက် Half Moon Bay ကိုသတိရကြပြီးကျွန်း၏အလှဆုံးရွေးချယ်မှုကိုမကြာခဏစဉ်းစားကြသည်။ Windsurfers မှနှစ်သက်မြတ်နိုးသည့်ကြားမှ၎င်းသည်မတူညီသောပင်လယ်ကမ်းခြေများကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်အရေအတွက်ကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ပါ။
အများပြည်သူဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာသည်ခန့်မှန်းထားသည့်ဂျီဒီပီ၏ ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုညွှန်ကြားချက်များအတွက်သုံးစွဲသည်။ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းသောခွဲစိတ်မှုများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခုနစ်နှစ်ကျောင်းတက်ရန်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ယောက်ျားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၂ နှစ်နှင့်အမျိုးသမီး ၁၃ နှစ်တွင်ကျောင်းနေရန်အကဲဖြတ်ရသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာအတန်းရွေးချယ်ထားသောကျောင်းတွင်ကျောင်းတက်နေသည့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ ဦး ရေအချိုးသည် ၂ မှ ၁ အထိရှိသည်။
အမှန်တကယ်အားဖြင့်ကျွန်းများသည်လွတ်လပ်မှုရှိသော်လည်းအစိုးရသည်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် ၂ သည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ရော့ဒ်နီဝီလျံ၏ပြောဆိုမှုသည်သူတို့၏ ဦး စီး ဦး ဆောင်အဖြစ်ရှိနေသေးသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့် ၀ န်ကြီးချုပ် Gaston Browne နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအိမ် (၂) ခုအထက်လွှတ်တော်နှင့်အောက်လွှတ်တော်တို့ထပ်မံရှိသည်။
Antigua နှင့် Barbuda သည်တရားမ ၀ င်အမြတ်ထုတ်ခြင်း၊ ပြည့်တန်ဆာအမျိုးအစားနှင့်ပတ်သက်သောလိင်မှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများကိုအရက်ဆိုင်နှင့် whorehouses များတွင်တွေ့ရသည်။ အကန့်အသတ်ရှိသောအလုပ်ကိုရှာဖွေရန်မှာမလွယ်ကူပါ၊ တရားမ ၀ င်ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်မှုများကိုသတ်ဖြတ်ရန်သတ္တိရှိရှိကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများပြုလုပ်သောကျွန်းများကိုလူသိများခြင်းမရှိသော်လည်းနောက်ကွယ်မှအဖြစ်အပျက်များကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ကာရစ်ဘီယံဒေသတွင်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်း၏ဂျီဒီပီ၏ကြီးမားသောရေတွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံဂျီဒီပီ၏ ၆၀ ရာနှုန်းကိုရရှိခြင်းအားဖြင့်လုပ်သားအင်အား၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ရှိနေသည်ကိုမည်သူမျှမအံ့သြသင့်ပါ။
ဗြိတိသျှတို့ကကိုလိုနီခေတ်တွင်ကြံကြံသည် Antigua's စျေးကြီးသောစျေးသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ လက်အောက်ခံခြင်းကိုပြည်ပပို့ကုန်သံသရာအရှိန်မြှင့်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစုတွင်ထိုကျွန်များလွတ်မြောက်ပြီးနောက်တွင် Antiguan နေထိုင်သူမြောက်မြားစွာသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတောင့်တခဲ့ကြပြီးအခြားသူများသည်အခြားကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံများနှင့်ဆင်တူမှုများကိုပြုလုပ်လိုကြသည်။
မောင်းနှင်မှုသည်အန်ဂျဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသိအမှတ်ပြုသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။ အငှားယာဉ်များကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမူဘောင်များထူထောင်သော်လည်းမရှိသလောက်အသုံးပြုကြသည်။ ထို့အပြင်အနီးအနားရှိလှေများနှင့်သင်္ဘောများမကြာခဏပြေးလေ့ရှိပြီး Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ခရီးများလည်းရှိသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်းများရှိဒေသခံများသည်အတော်အသင့်ကောင်းမွန်ပြီးအမျိုးသားများအတွက်အနာဂတ်မှာ ၇၅ နှစ်ခန့်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများမှာမူ ၇၉ နှစ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ဂျီဒီပီ၏ ၅.၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်သာယာဝပြောရေးအတွက်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေ၏ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်ကာသင့်လျော်သောပိုးသတ်နေရာများသို့ချဉ်းကပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများအကြားအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော်လည်းလစာတည်ငြိမ်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်လက်ရှိဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိကြသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်မိသားစုယူနစ် ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းတွင်တီဗီများတပ်ဆင်ထားပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်လူ ၁၀၀၀ လျှင် ၁,၂၇၁ ဆဲလ်ဖုန်းအသင်း ၀ င်ခဲ့သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပြင်ဘေးကျွန်းပေါ်ရှိအဓိကအလုပ်အမျိုးအစားမှာစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများတွင်ချည်၊ မြေဆီလွှာ၊ ကြံနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များပါ ၀ င်သည်။ အဓိကလုပ်ငန်းများ၌ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အလင်းရောင်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဥပမာအဝတ်အထည်နှင့်အရက်များပါဝင်သည်။
အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သိသာထင်ရှားသည့်မေးခွန်းများမရှိပါ။ ၎င်းတို့တွင်ပိုလန်၊ ကင်မရွန်း၊ အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံများအပါအ ၀ င်ခရီးသွားခုံများပါ ၀ င်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း
အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
Antigua နှင့် Barbuda တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အချိန်ကိုတွက်ချက်သည်
ချက်ချင်းတစ်သက်တာနိုင်ငံသား။ အလွန်သေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်5နှစ်တိုင်းသက်တမ်းတိုး။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူချက်နှစ်မျိုးလုံးကို Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသားများကိုခွင့်ပြုထားသည်
အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများ နိုင်ငံသား။ Antigua နှင့် Barbuda ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်
အိမ်ခြံမြေ / လှူဒါန်းခြင်း / စီးပွားရေး
ဘာကြောင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့သွား Antigua နှင့် Barbuda ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသလဲ?
အလွန်လှပသောသဘာဝအလှအပရှိသောကာရစ်ဘီယံကျွန်းများဖြစ်သောအန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အမြန်ဆုံးရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များကိုတစ်ခုပေးသည်။ လျှောက်လွှာတွင်မိသားစု ၀ င်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေခွန်ကိုမပေးရဘဲအရင်းအနှီးအမြတ်ခွန်၊ အိမ်ခြံမြေအခွန်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ၀ င်ငွေခွန်လည်းမရှိပါ။ Antiguan ၏နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည်အီရန်လျှောက်ထားသူများအားလည်းလက်ခံသည်။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိမိသားစုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
သင်၏မိသားစုဝင်များကိုလျှောက်လွှာတွင်သင်ထည့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောခရီးသွားရွေးချယ်မှုများကိုရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်၊ ၂၆ နှစ်အောက်ကလေးများနှင့် ၆၅ နှစ်ကျော်အဘိုးအဘွားများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ မိဘများသည်အဓိကလျှောက်ထားသူနှင့်အတူအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည်။ ကလေးများသည်ကျောင်းသားများဖြစ်သရွေ့အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။
နိုင်ငံသား Antigua နှင့် Barbuda ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား
လျှောက်လွှာတင်သည့် နေ့မှစ၍ သင်၏ဗီဇာရရှိသည်အထိ ၃-၄ လမျှသာကြာပြီးလျှောက်လွှာတင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်၏လျှောက်လွှာကိုသင်၏နိုင်ငံမှတင်သွင်းနိုင်သည်။ Antigua နှင့် Barbuda တွင်မတိုင်မီနှင့်အပြီးတွင်နေထိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ နိုင်ငံသားဖြစ်လာရန်။ သင်၏နိုင်ငံသားရရှိပြီးနောက် ၅ နှစ်အတွင်းသင်တိုင်းပြည်တွင် ၅ ရက်သာနေထိုင်ရမည်။
အိမ်ခြံမြေရွေးချယ်မှုအောက်ရှိအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်စီမံကိန်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တည်ဆောက်သူသည်နိုင်ငံသားလျှောက်လွှာအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည်။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ဘဏ္requာရေးလိုအပ်ချက်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတဆင့် Antigua နိုင်ငံသားအဖြစ်ရရှိရန်နည်းလမ်းသုံးခုရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာဒေါ်လာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရန်ပုံငွေသို့ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ နှင့်ညီမျှသောလျော်ကြေးငွေဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ၅ နှစ်အထိထိန်းသိမ်းထားပြီးသို့မဟုတ်စီမံကိန်း၏သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအထိထိန်းသိမ်းထားသောပြည်နယ်မှအတည်ပြုထားသောအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းတွင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀၀ ကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၅၀၀,၀၀၀ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၄၀၀,၀၀၀ (စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ ၅,၀၀၀,၀၀၀) ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ နှင့်လူတစ် ဦး စီအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅၀၀ တန်ပါ ၀ င်သည်။ လျှောက်လွှာတွင်ပါ ၀ င်သည့်မိသားစု ၀ င်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ အပို ၀ န်ဆောင်ခများအတိအကျပေးရမည်․
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလည်းထောက်ခံမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ဖြစ်သည် Antigua နှင့် Barbuda မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ Antigua နှင့် Barbuda မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံမှနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူရန် Antigua နှင့် Barbuda ရှိဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Antigua နှင့် Barbuda မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda မှ Golden Visa သို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda သို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်သာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ Antigua နှင့် Barbuda မှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီ။ အပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်သည်။ Antigua နှင့် Barbuda သို့မဟုတ် offshore တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုလျှင်၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာတို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းမှာဘဏ္planningာရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
Antigua နှင့် Barbuda နှင့်အလယ်တန်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားနိုင်ငံသားအခြေပြုဖြေရှင်းမှုများနှင့်ကူညီခြင်း။
Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသားများအတွက်အထူးထောက်ပံ့မှု -
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ Antigua and Barbuda အတွက်၊ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ၊ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသား၊ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏တတ်နိုင်နိုင်ငံသားနှင့် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ Antigua နှင့် Barbuda မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ Antigua နှင့် Barbuda ရှိရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ Antigua နှင့် Barbuda မှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
Antibua နှင့် Barbuda မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း Antigua နှင့် Barbuda မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ Antigua နှင့် Barbuda ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ Antigua နှင့် Barbuda မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
Antigua နှင့် Barbuda မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
Antigua နှင့် Barbuda မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
အိမ်ခြံမြေမှတစ်ဆင့် Antigua နှင့် Barbuda ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်သူတို့ပြုလုပ်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှထွက်ခွာလိုပါက client သည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်ကြောင်းရှုထောင့်မှ Antigua နှင့် Barbuda တွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Antigua နှင့် Barbuda ရှိကောင်းမွန်သောစံချိန်စံညွှန်းများရှိပြီးသူတို့၏အိမ်ခြံမြေများသည်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါရှိကောင်းသောအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်သာဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည် Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါမှသို့မဟုတ်အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအတွက်ဖောက်သည်များအား Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန ဦး Due Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်လုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို scan ဖတ်ရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများနှင့်ရွှေဗီဇာသည်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Duration:3လအတွင်း
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Antigua နှင့် Barbuda တို့၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖြင့်အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်ကောင်းသောသတင်းကိုမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြစ်သည် Antigua နှင့် Barbuda မှကုန်သည်များသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားရောင်းချသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda သို့သို့မဟုတ်မှသို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ၏စက်မှုလုပ်ငန်းမှသူလျှိုလုပ်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ဖြစ်သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြစ်သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သော Antigua နှင့် Barbuda အတွက်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda တို့ကိုထောက်ပံ့မှုမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ဖြစ်သည် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ဖြစ်သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့် ၄ င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ Antigua နှင့် Barbuda ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတွင်ကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား Antigua နှင့် Barbuda ရှိရှေ့ရပျ Antigua နှင့် Barbuda ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည် Antigua နှင့် Barbuda နှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစေရန်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးယူထားသည်။ သို့သော်လျှောက်ထားမှုကိုအတည်ပြုရန် Antigua နှင့် Barbuda ရှိအာဏာပိုင်များကငြင်းပယ်မှုအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ နိုင်ငံသားအဖြစ် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း Antigua နှင့် Barbuda နှင့်အခြားနိုင်ငံများမှနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအပြင်အခြားအထောက်အပံ့များလည်းများစွာရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများအတွက် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံများနှင့် Antigua နှင့် Barbuda ၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များအရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားသည် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဈေးအပေါဆုံးဖြစ်ပြီး Antigua နှင့် Barbuda အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းထားရှိသည်။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ပေးသော Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံများတွင် Dual Citizenship ဖြစ်ခြင်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရယူခဲ့သည်။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်နိုင်ငံသားခံယူခြင်းနှင့် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်တရားဝင်အေးဂျင့်များသည်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကတိပြုထားသည့် Antigua နှင့် Barbuda ကိုင်တွယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လျှောက်လွှာအတွက်အကောင်းဆုံး solicitors နှင့်အေးဂျင့်များရှိသည်။
သင်၏ Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသားဖြစ်မှုမတိုင်မှီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင် Antigua နှင့် Barbuda အပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်။
အမှု၌၊ သင်၏နိုင်ငံသားသည် Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်တွက်ချက်ပါ
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကို Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းအားဖြင့်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်များအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျငွေနှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ဖြစ်သည်
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ယာယီနေထိုင်ခွင့် Antigua နှင့် Barbuda ၌တည်၏
Antigua နှင့် Barbuda တွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်
Antigua နှင့် Barbuda သံရုံးများနှင့်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများ
Antigua နှင့် Barbuda ရှိအခွန်များ
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း Antigua နှင့် Barbuda နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောနောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအပြင် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်းကို Antigua နှင့် Barbuda အတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကို Antigua အတွက် one-stop shop ဖြစ်စေသည်။ ဘာဘူဒါနှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံ။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အတွက်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျော်လွန်သောလမ်းကိုထောက်ခံသည်။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီ
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ သို့မဟုတ် Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (Antigua နှင့် Barbuda တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
Antigua နှင့် Barbuda သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိငွေပေးချေမှုသည့်ဂိတ်
Incig အတွက်သင်အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်လိုအပ်သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ် Antigua နှင့် Barbuda ရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် သင်အစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါများ Antigua နှင့် Barbuda ရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးစတင်ပါ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ချက်ချင်းစတင်ပါ။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ HR ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ Antigua နှင့် Barbuda ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် Antigua နှင့် Barbuda တွင်နေရာချထားပါ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ Antigua နှင့် Barbuda အတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိဘဏ္Plာရေးဆိုင်ရာစီမံချက်
စာရင်းကိုင်, Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Virtual Office Address
Antigua နှင့် Barbuda တွင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက် Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကို Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်
Antigua နှင့် Barbuda တွင် Web Design
Antigua နှင့် Barbuda ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ App Development
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ SEO
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြေများအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များကိုအန္တိဂွာနှင့်ဘာဘာဒါတွင်လည်းရှိသည်။ Antigua နှင့် Barbuda တစ် ဦး ချင်းစီနှင့် ၄ င်းတို့မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည် Client ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများသို့နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရရှိထားပြီး၊
Antigua နှင့် Barbuda ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကြောင့် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်သင့်ကိုယ်စားဥပဒေအရဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်ရှိလျှင်သို့မဟုတ်အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏အငြင်းပွားမှုအားတရား ၀ င်အသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်တလင်း (သို့) တရားဝင်ဖြစ်စေတရားဝင်ဖြစ်စေ Antigua နှင့် Barbuda ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှပြုလုပ်သင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသား
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏အဓိပ္ပာယ်ကားအဘယ်နည်း။
Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကို Antigua နှင့် Barbuda တို့၏စီးပွားရေးတွင်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda နေထိုင်ခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ Antigua သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ဘာဘူဒါ၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်ကနေထောက်ပံ့ခြင်း၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှု၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းနှင့်အန္တီဂွာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းမှတဆင့် နှင့်ဘာဘူဒါတို့သည် Antigua နှင့် Barbuda ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှအလုပ်လုပ်ကြသည်။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ | Antigua နှင့် Barbuda ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နေထိုင်ခွင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမည်သို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသနည်း။
Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Antigua နှင့် Barbuda ကဲ့သို့စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda တို့၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားပါ။ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားကထောက်ခံသည် Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါသည်။ Antigua နှင့် Barbuda ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ Antigua နှင့် Barbuda ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ Antigua နှင့် Barbuda ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ | Antigua နှင့် Barbuda ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ Antigua နှင့် Barbuda | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဘာဂူဒါ | Antigua နှင့် Barbuda အတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏အဓိပ္ပါယ်သည်ဘာလဲ။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို Antigua နှင့် Barbuda တို့၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Antigua နှင့် Barbuda သို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားပါ။ ၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်သည်အန္တီဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယအပတ်ပတ်လည်ရှေ့နေများမှတစ်ဆင့်၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကထောက်ခံသည်၊ အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများမှတဆင့်ကူညီခဲ့သည်။ Antigua နှင့် Barbuda ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ Antigua နှင့် Barbuda ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ Antigua နှင့် Barbuda ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ Antigua နှင့် Barbuda ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ | Antigua နှင့် Barbuda အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရွှေဗီဇာဖွင့်ဆိုချက်ကဘာလဲ။
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရွှေဗီဇာကိုအစိုးရအနေဖြင့်ငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေများစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်သည်။ အင်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ရွှေဗီဇာ ၀ န်ဆောင်မှုများကထောက်ပံ့ပေးသောအန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါအတွက်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ အန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများတွင်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများမှတဆင့်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Antigua နှင့် Barbuda ရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Antigua နှင့် Barbuda ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | Antigua နှင့် Barbuda ရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ Antigua နှင့် Barbuda ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ Antigua နှင့် Barbuda ရှိ Golden visa ရှေ့နေများ Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဥပဒေအရပံ့ပိုးပေးပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ Antigua နဲ့ Barbuda ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေနှင့် Antigua နှင့် Barbuda မှအေးဂျင့်များသည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
နိုင်ငံသားခံယူခြင်းဖြင့် Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အကုန်အကျများပါသလား။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည် Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Antigua နှင့် Barbuda အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များသည်အသားတင်အမြတ်မြင့်မားသောလူတစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တိုင်ပင်ကြေးကို Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းနည်းများ။
မည်သည့်နိုင်ငံသားများသည် Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ် Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဗီဇာဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သနည်း။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုနိုင်ငံတိုင်းမှနိုင်ငံသားများကအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်နိုင်ငံသားသည်အာရှမှအန္တာဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအာဖရိကမှအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါတို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဥရောပမှ Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ တောင်အမေရိကမှအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါ၊ မလေးရှားမှအန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှအန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအင်ဒိုနီးရှားမှအန္တိဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ နီပေါနိုင်ငံမှ Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအိန္ဒိယမှ Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည်ယူအေအီးမှ Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
Antigua နှင့် Barbuda သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ
Antigua Pier Group မှလီမိတက်
Antigua ပြည်သူ့အသုံးအဆောင်များအာဏာပိုင် (APUA)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယူနစ် (CIU) မှနိုင်ငံသားဖြစ်မှု
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊
ဘဏ္ofာရေးနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ကြီးဌာန
လူမှုအသွင်ပြောင်း ၀ န်ကြီးဌာန၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူငယ်နှင့်ကျား၊
အန္တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါ Training ည့်ဝတ်ပြုခြင်းသင်တန်းကျောင်း (ABHTI)
အားကစား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသားပွဲတော်နှင့်အနုပညာ ၀ န်ကြီးဌာန
Antigua နှင့် Barbuda ၏အမြင့်ဆုံးစာရင်းစစ်ဌာန
ပြည်သူ့အသုံးအဆောင်များ၊ မြို့ပြလေကြောင်းနှင့်စွမ်းအင် ၀ န်ကြီးဌာန
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး
ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန
ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနှင့်အလုပ်သမား
ခရီးသွားလာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ကြီးဌာန
တောင် စိန့်ဂျွန်ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ (MSJMC)
Merchant Shipping and Shipping Registration
Antigua နှင့် Barbuda ခရီးသွားလုပ်ငန်းအာဏာပိုင်
link ကိုမှ Antigua နှင့် Barbuda ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန Antigua နှင့် Barbuda ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်
Antigua နှင့် Barbuda တည်နေရာ